အဘယ်ကြောင့်လိင်အမျိုးမျိုး၏စိတ်ကူးသည်ဤမျှစွဲမက်စရာကောင်းသနည်း။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
အဖြေ: Dopamine နှင့် အခြား neurochemicals ။
လိင်ကွဲပြားမှု။ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး က -
ငါစေ့စပ်, ငါ, ငါ့အနာဂတ်ဇနီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ချင်နေပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုမိန်းကလေးကိုမြင်သောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ကိုယ့်ကို (စကားလုံးများအတွက်စိတ်မကောင်း) သူမ၏ fuck ဆိုတဲ့ချင်, ငါသည်အခြားမြင်သောအခါ, ထို့နောက်ငါလည်းသူမ၏ fuck ဆိုတဲ့ချင်တယ်။ 2004 ၌ငါအံ့သြလောက်အောင်ကိုသဘာဝလှပသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူဥရောပ porn ကိုမြင်တော်မူ၏။ ထို့နောက်အစဉ်မပြတ်ငါသူတို့အားမိန်းကလေးငယ်အချို့မြည်းစမ်းချင်ခဲ့ကြပြီးကတည်းက။ ငါကပိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သည်အတိုင်း, ငါကပိုထိုကဲ့သို့သောဥရောပ porn ရှာ၏။ ဒါနဲ့ထွက်သွား, ထိုသို့ခံစားရပုံကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်ထိုကဲ့သို့သောမိန်းကလေးငယ်များ fuck ဆိုတဲ့ကဘာလဲဆိုတာ။ ဒါ့အပြင်စသည်တို့ကိုငါကအရမ်းရွေးချယ်ဖြစ်လာကြပါပြီ, ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြ, ငါကိုယျခန်ဓာကိုသာအထူးသဖြင့်အမျိုးအစားချင်အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားလိင်အင်္ဂါဖြစ်သောကြောင့်
ဤစိတ်ဆန္ဒများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်ဆံရေးမပြည့်စုံဘဲကျန်နေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲမှအချို့သည်ပုန်ကန်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ကျွန်မစေ့စပ်ထားတာကမိန်းကလေးကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့သူမကိုဆုံးရှုံးဖို့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစိတ်ဓာတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်ခံစားနေရသောအခြားမိန်းကလေးများအပေါ်အလွန်အကံျွခံစားနေရမှု၊ ကျွန်ုပ်မိန်းကလေးတစ် ဦး မှနောက်တစ်ခုသို့ (အပြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကူးအပြောင်းလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့) ဤအလိုဆန္ဒကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးပါ။
ထိုကဲ့သို့သောယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်၎င်း၏အဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းများနှင့်အမျိုးမျိုးကဲ့သို့အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှု (ကြည့်ပါ - porn, အသစ်အဆန်းများ, နှင့် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု), (ထိုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဆက်လက်ရှိနေရန်ဖြစ်ပါသည်) အကြောင်းအရာ pair တစုံနှောင်ကြိုးဆက်ထိန်းနိုင်စွမ်းနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပါ။
လူသားများသည်နှောင်ကြိုးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူတကွနေထိုင်ရန်ကြိုးပင်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်မည်သည့်သားသမီးနှင့်မဆိုချစ်ကြရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးကင်းစကလေးများသည်ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်သူနှစ် ဦး ရှိသည်။ ၎င်းမှာလူသားများသည်ရင့်ကျက်ရန်အချိန်များစွာကြာသောကြောင့်သူတို့၏ရှင်သန်နိုင်မှုအလားအလာကိုတိုးတက်စေသည်။
သို့သော်ထိုအသမဂ္ဂများဆီသို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းကြောင်း, ဦးနှောက် circuitry အလွန်လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပြုအမူများကပြန်ပေးဆွဲကြောင်းတူညီသော circuitry ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဥပမာအဘို့, မူးယစ်ဆေးဝါး, အရက်, လောင်းကစား, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ကိုတက်ချိတ်တွဲခြင်းနှင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက် sexing များအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခံစားချက်တွေကိုပေးစေခြင်းငှါရှိကွောငျးဦးနှောက် circuitry hijack ။ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, အထူးသဖြင့်ဖြားယောင်းဖြစ်ပါသည် ဝတ္တု မိတ်ဖက် အလိုအလျှောက် အပို dopamine ထုတ်ပေး - နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ပိုမိုလျင်မြန်စွာပိုပြီးသုတ်ရည် ejaculate။ (နို့တိုက်သတ္တဝါများသည်တစ်မူထူးခြားစွာမတူကြပါ။ အားလုံးသောနှောင်ကြိုးများပင်ဖြစ်သည်။ မိခင်သဘာဝမှကျွန်ုပ်တို့အားမျိုးရိုးဗီဇများပိုမိုအသုံးပြုရန်အဓိကအခွင့်အလမ်းများအားသွေးဆောင်ခြင်းခံရသည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအခွင့်အလမ်းများမှာရှားပါးပြီးအစစ်အမှန်ပါတနာများပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ကွဲပြားမှုကိုတုံ့ပြန်နေဆဲဖြစ်သည်။ )
ဥပမာအားဖြင့်, အခါ, သြစတြေးလျသုတေသီများ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုမှာတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတာကိုတွေ့ရစဉ်။ အဆိုပါ "တူညီတဲ့ဟောင်းတူညီဟောင်း" ရုံပျင်းစရာရရှိသွားတဲ့။ Habituation သည်ကျဆင်းနေသည့် dopamine ကိုဖော်ပြသည်။ ကြည့်ရှုခြင်း ၁၈ ခု - စမ်းသပ်မှုများခေါင်းတညိတ်ညိတ်ဖြစ်နေသကဲ့သို့ - သုတေသီများသည်အသစ်သော erotica (၁၉) ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်th နှင့် 20th ရှုမြင်ကြသည်။ ဘင်ဂိုကစား! အဆိုပါဘာသာရပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ penises အာရုံစိုက်မှုမှပေါ။ (ဟုတ်ပါတယ်, အမျိုးသမီးတွေအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသ.)
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဖြစ်ပါသည် အကျိုးကို circuitry ဖို့အထူးသဖြင့်ဖြားယောင်း အသစ်အဆန်းရုံကလစ်ပျောက်အမြဲကြောင့်။ ဒါဟာသင်သို့မဟုတ်-ကွက်လပ်ဖြည့်ပါတဲ့ဝတ္ထု "အိမ်ထောင်ဖက်," ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင်ကွင်းတစ်ခု, ထူးဆန်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျိုးစုံ tabs များပွင့်လင်းနှင့်နာရီကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မုဆိုးစုဆောင်းဘိုးဘေးတစ်တသက်တာမှာကြုံတွေ့ထက်ပိုမိုဝတ္ထုလိင်မိတ်ဖက်တိုင်းဆယ်မိနစ်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက် porn သည်ပုံသဏ္,ာန်၊ အရွယ်အစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးရှိသော“ မိတ်ဖက်များ” ၏ပုံမှန်စီးဆင်းမှုကိုပေးသည်။ ပြီးတော့ငါတို့ ဦး နှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဟောင်းကသူတို့အားလုံးကိုရိပ်မိတယ် မျိုးရိုးဗီဇအခွင့်အလမ်းများ။ ရလဒ်? အသစ်သော“ အခွင့်အလမ်း” သည်သူမအား fertilize လုပ်ရန်နှင့်နောက်တစ်ခုကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းရန်ကြီးမားသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် dopamine ကိုထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်။ Coolidge Effect) ။ ဤအယူအဆထဲမှာရှင်းပြ Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက် ဗီဒီယိုက။
ဤအရာသည်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အရာဝတ္ထုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်လိုက်ခြင်း / နှောင်ကြိုးတိုက်ဖျက်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဆွဲဆောင်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ပမာဏကို dopamine ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် အခြားအ neurochemicals။ အကယ်၍ အခြားလုပ်ဆောင်မှုများသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းခြင်းနှင့်တွဲဖက်ခြင်းများထက် dopamine ပိုမိုထွက်ပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးမှုများသည်သတိရှိသောအသိတရားမရှိဘဲမသိမသာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်အထိပုံပျက်သွားလိမ့်မည် ပုံမှန် sensitivity ကိုမှပြန်နှစ်, လ, အနည်းငယ်ကြာရသော မပါဘဲ ပြင်းထန်သောဆွ။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသောပြည်ထောင်စုတစ်ခု၏စိတ်ကူးကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသော်လည်းအသစ်သောမိတ်ဖက်များ၊ လိင်မှုကိစ္စအမျိုးမျိုးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအတွေးများမှဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆွဲဆောင်အားကောင်းသော dopamine မြင့်တက်မှုကြောင့်ကျွန်မတို့အားတုန်လှုပ်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်ဟန်ချက်ညီညီပြန်လာနေစဉ်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်နေခြင်းဟူသောအတွေးသည်အတွင်းပိုင်းပconflictိပက္ခနှင့်နာကြည်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် dopamine အလွန်အကျွံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှောင်ကြိုးယန္တရား၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။ မကြာသေးမီက monogamous တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနကရှင်းလင်းပြတ်သားသောကြောင့်ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည်။ dopamine ကိုထိမိစေသည့်ဓာတုလှုံ့ဆော်မှုဖြင့် bonders ၏ ဦး နှောက်နှစ်ခုကိုသိပ္ပံပညာရှင်များသည်သန္ဓေသားလောင်းဖြင့်သုတ်သင်သောအခါ၊ မရှိတော့တဦးတည်းအဖော်များအတွက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအတုဆွရုံပုံမှန်အစည်းအဝေး (ကရာ) နို့တိုက်သတ္တဝါများကဲ့သို့သူတို့ကိုငါစွန့်ခွာ, သူတို့ရဲ့ dopamine-မှီခို Bond စက်ယန္တရားပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာကောင်းသောအရသာရှိမှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကြဲရန်တိုက်တွန်းသည့်တူညီသော sensitivity သည်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဆက်မှုနှောင်ကြိုးပေါ်မူတည်သည့်တိုက်နယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်ဖက် မှလွဲ၍ အခြားလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သော dopamine နှင့်ပေါင်းစပ်နေသည်။ ၎င်းသည်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားစေဘဲကျွန်ုပ်တို့၏သာမာန်အခြေအနေကိုယိမ်းယိုင်စေနိုင်သည်။
အင်တာနက်က porn (သို့မဟုတ် porn စိတ်ကူးယဉ်) ၏ပြင်းထန်သောဆွခြင်းမရှိဘဲအချိန်ကိုအကောင်းဆုံးကုသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ချစ်ခင် နှောင်ကြိုးရန်မသိစိတ်တစ်ပိုင်း signal ကိုထောက်ပံ့နေဖြင့်လည်းကူညီပေးသည်။